Fitsidihan’ny Papa: nisaotra ny vahoaka ny filoha Rajoelina - ewa.mg
Fitsidihan’ny Papa: nisaotra ny vahoaka ny filoha Rajoelina
News - Fitsidihan’ny Papa: nisaotra ny vahoaka ny filoha Rajoelina
“Misaotra eram-po eran-tsaina antsika tsirairay avy ny tenako. Ireo avy amin’ny fiangonana katolika notarihin’ny kardinaly sy ny eveka rehetra izany, ireo mpitandro filaminana isan-tokony izay nanao ny asany tamim-pahamatorana sy tamin’ny fahaiza-manao, ireo mpiara-miasa rehetra isan-tokony… “
Io ny fisaoran’ny filoha Rajoelina, afakomaly, noho ny fahatomombanan’ny fitsidihan’ny Papa Fransoa teo. Nisaorany koa ireo orinasa nanampy; indrindra koa ny vahoaka manerana ny Nosy, niara-niombom-po sy niara-nivavaka ary niara-nitondra amim-bavaka na ny fandraisana ny Papa na ny hoavin’ny firenena.
Tontosa tamim-pahamendrehana sy tamim-pitiavana ary tamim-pilaminana ny fandraisana ny Papa. Zava-dehibe loatra ho an’ny Malagasy sy ho an’ny firenena iny fitsidihana iny.
“Antenaiko fa hitondra aim-panahy sy fanantenana amin’ny ho avy ary indrindra, ho amin’ireo tanjona tiantsika hapetraka miaraka izany fitsidihana izany: ny famerenana ny firenena mba ho sangany”, hoy izy. Indrindra mba haharesy ny fahantrana sy ny fahalovana.
Firaisankina, fiaraha-mientana, fahamendrehana ary fifankatiavana ao anatin’ny fitiavan-tanindrazana. Izay no naseho nandritra ny fandalovan’ny Papa, iriny sy irariany raha toy izany hatrany ny atao manomboka izao amin’ny fanarenana ny firenena.
Mendrika ny vahiny nohajaina izay raiamandreny am-panahy ny asa natao ary nanome haja sy hasina ny firenena izany. “Ho ela velona anie i Madagasikara, ao anatin’ny fanantenana sy ny fiadanana ary ny fandrosoana“, hoy ny famaranany ny hafatra.
L’article Fitsidihan’ny Papa: nisaotra ny vahoaka ny filoha Rajoelina a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 12/09/2019
Tenisy – Roland Garros: resin’ilay Sinoa, i Wang Xinyu i Tessah
Tapitra hatreo ihany koa ny lalan’i Tessah, eo amin’ny fiadiana ny Roland Garros, taranja tenisy. Nihintsana izy rehefa lavon’ilay Sinoa, i Wang Xinyu, teo amin’ny fihodinana faharoa.Nifarana, omaly alakamisy, teo amin’ny fihodinana faharoa ny dian’Andrianjafitrimo Tessah, ilay mpilalao tenisy malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay, teo amin’ny fiadiana ny Roland Garros, tafiditra ao anatin’ny “Grand chelem”. Fihaonana, tanterahina any Frantsa.Resin’ilay teratany sinoa, i Wang Xinyu, tamin’ny seta 2 no ho 1 (6/4 ; 5/7 ; 6/1), i Tessah. Niady ny seta roa voalohany teo amin’ny fihaonan’izy mirahavavy, saingy tany amin’ny seta fahatelo no tsy nahatohitra intsony i Tessah. Lasan’i Wang ny seta voalohany ary tena nifanakaiky ny lalao satria niafara tamin’ny 6 no ho 4. Mbola nangotraka ihany koa ny seta faharoa izay azon’i Tessah ary 7 no ho 5 ny niafaran’ny lalao . Nihevitra ny rehetra fa mety tsy haharesy an’i Tessah i Wang teo amin’ny seta fahatelo, saingy ny nifanohitra tamin’izany no nitranga. Nataon’i Wang, tsy nisotro rano mihitsy izy ary toy ny nanaovany fanazarantena fotsiny, satria tsy nahazo afa-tsy lalao iray monja i Tessah, tao anatin’izany seta fahatelo izany. Hidona amin’ilay teratany arzantina, i Nadia Porodoska, izay nandresy an’ilay Romana, i Jaqueline Cristian, i Wang Xinyu, eo amin’ny fihodinana fahatelo.Azo lazaina fa tsara ny dingana vitan’i Tessah, tamin’ity satria nahadingana ny fihodinana voalohany rehefa nandresy ilay Espaniola, i Parizzas Dias. Tsy misy teratany malagasy intsony izany miatrika ity Roland Garros ity.Raha tsiahivina, fihodinana voalohany dia efa nihintsana Ramialison Irina rehefa lavon’ilay Aostralianina, i Astra Sharma, ny tenany tamin’izany.Marihina fa tamin’ny alalan’ny fanasana manokana “wild card” no nahafahan’izy mirahavavy ireo niatrika ity fifaninanana ity. TompondakaL’article Tenisy – Roland Garros: resin’ilay Sinoa, i Wang Xinyu i Tessah a été récupéré chez Newsmada.
COVID-19: Situation du 10 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Situation du 10 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Ce 10 Septembre 2020, Madagascar enregistre 104 nouveaux cas sur 742 tests effectués. Même si ces nouveaux cas sont éparpillés dans plusieurs régions, Analamanga reste l’épicentre de cette pandémie avec 53 nouveaux cas ces dernières 24h, suivi de la région de Vakinankaratra avec 20 nouveaux cas, la région de Diana avec 20 nouveaux cas, la région Amron’i Mania avec 4 nouveaux cas, la région de Sava avec 6 nouveaux cas et la région de Sofia avec 1 nouveau cas. Désormais, 14 295 personnes sont totalement guéries du Covid-19 car ce jour, 52 personnes rétablies sont recensées par le CCO-COVID-19. De ce fait, 1119 patients suivent encore des traitements dont 48 presentent des formes graves. Par ailleurs, deux personnes ont succombé au coronavirus, localisées dans la région Haute Matsiatra et Diana, portant à 208 le nombre total des personnes décédées du Covid-19. Rappelons nous que depuis le debut de la pandémie, Madagascar enregistre 15 624 personnes contaminées L’article COVID-19: Situation du 10 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Soavianandriana, Morombe, Toliara II, Beroroha… Notsikafonin’ny depiote ireo tranga mahabe taraina ny mponina noho ny fandikan-dalàna, fihoaram-pefy ataon’ny zandary sasany. Vokatr’izany, hisy fanadihadiana sy famotorana ifotony hatao ka handraisana fepetra ireo zandary voakasika izany.“Handraisana fepetra tsy misy hatak’andro ka hanaovan’ny foibem-pibaikoan’ny zandarimariam-pirenena famotorana ifotony ireo fitarainana sy porofo voalazan’ny solombavambahoaka mikasika ireo zandary manao fandikan-dalàna”, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, nandritra ny fivoriana sy dinika manokana niarahana tamin’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena (COMGN), ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa tao amin’ny birao fiasany eny Betongolo, ny alatsinainy teo. Nandritra io fivoriana io koa no nametrahana ny fandrindrana ny firaisan-kery entina hampanjakana ny filaminana sy fandriampahalemana ao anatin’ny fanajana ny tany tan-dalàna. Voadinika niaraka tamin’ny solombavambahoaka sy ny lehiben’ny distrikan’i Soavinandriana koa ny hamahana ny olana mifandraika amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny fihetsika ary ny fomba mamohehatra ataon’ireo zandary sasany ao amin’ny tsenan’omby ao Soavinandriana Itasy ka hametrahana “guichet unique”, manomboka izao.Omena tombondahiny ireo zandary tena miasa…Misy amin’ireo zandary no tena miasa na eo aza ireo “saonjo iray lohasaha”. Omena tombondahiny kosa ireo zandary teny miasa ary ireny no mendrika homena galona, araka ny filazany hatrany. Vao haingana koa no nisy ireo zandary tsy sahy mandray andraikitra manoloana ny tsy fandriampahalemana tahaka ny zava-nitranga tany amin’ny distrikan’Amboasary Atsimo. Tsy nety handeha hanara-dia ireo zandary ary tsy sahy nivoaka. “Misy ireo zandary tsy matihanina eny amin’ny terrain toy ireo miasa any Amboasary Atsimo. Ireo iharan’ny fanafihana indray no manao fanadihadiana”, hoy izy.Nanamafy ny Seg fa miezaka hatrany manaja ny tarigetra nosafidiana dia ny hoe “Tanindrazana sy lalàna” ny zandarimariam-pirenena ary miara-miasa amin’ireo olom-boafidy sy olom-boatendry mba hampanjakana ny tany tan-dalàna hiarovana ny tanindrazana sy izay rehetra ao aminy.Jean ClaudeL’article SEG Jly Ravalomanana Richard: handraisana fepetra ireo zandary mihoa-pefy, mandika lalàna… a été récupéré chez Newsmada.
Teqball: taranja vaovao ho an’ny Malagasy
Taranja tsy mbola fantatry ny Malagasy loatra ny Teqball, saingy efa misy eto Madagasikara. Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy, teny amin’ny lapan’ny fanatanjahantena, ny asabotsy lasa teo, ny mombamomba azy, ity natrehin’ny filohan’ny komity olympika malagasy, Randrianasoloniaiko Siteny sy i Marius Vizer Junior, head of relation, eo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena. Fifangaroan’ny tenisy ambony latabatra sy ny baolina kitra ny Teqball. Raha tsorina izany dia baolina kitra lalaovina eny ambony latabatra. Ankizy 100 mianadahy teo no nisantatra ny filalaovana izany. Nanome ny pitsompitsony sy ireo teknika rehetra amin’ny fomba filalao Teqball, ireo teknisianina avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena. Marihina fa nanolotra latabatra roa, filalaovana izany Teqball izany, ny federasiona iraisam-pirenena, hampiasaina eto Madagasikara. «Noho ny fitiavan’ny ankizy ny baolina kitra, ny Teqball dia taranja hanome fahafinaretana, ho an’ireo tanora. Ho an’izao fanombohana izao, ny fitiavana aloha, mba hampiroboroboana azy, avy eo vao manangana ny federasiona», hoy Randrianasoloniaiko Siteny. Torcelin
Fampidiran-ketra : azo atao ny mampahaleo tena ara-bola ny kaominina
“Rehefa tena hetsehina sy mazava tsara ny itondrana ny fampidiran-ketra ifotony, tafiditra ny vola. Amin’izay no anaovan’ny kaominina fotodrafitrasa mba hisy hatrany ny fahatokisan’ny olom-pirenena handoa hetra. Rehefa hitany ny vola miditra, misy ny fangaraharana.”Io ny fanazavan’ny talen’ny fitsinjaram-pahefana eo anivon’ny minisiteran’ny Atitany, i Anjara Manatsara, momba ny atrikasa natao tany Anosy, afakomaly, niompana amin’ny fizakantenan’ny kaominina amin’ny vola. Eo koa ny fandrindrana ny fizarana ireo fanampian’ny fanjakana vola ho an’ny kaominina.Nokarakarain’ny minisiteran’ny Atitany sy ny minisiteran’ny Toekarena sy ny fitantanambola ny atrikasa, notohanan’ny Tetikasa fampandrosoana ny kaominina sy ny fitsinjaram-pahefana (projet Cid GIZ).R.Nd. L’article Fampidiran-ketra : azo atao ny mampahaleo tena ara-bola ny kaominina a été récupéré chez Newsmada.
Jery taratra…: Raharaham-pirenena.. marolafy
Vita sonia ny fandaharanasa fampisakafoana mpianatra an-tsekoly. 525 524 ny mpianatra hisitraka izany, raha 103 442 teo aloha. Hanana tombondahiny ny faritra Anosy sy ny faritra Androy, fa sekoly miisa 1 064 no hahazo. Faritra 17 no ho voasahan’ny tetikasa, izay vola 18 miliara Ar no enti-manana.Napetraka tamin’ny fomba ofisialy ny faritra faha-23: ny faritra Vatovavy iarahan’ny distrikan’i Nosy Varika, Ifanadiana, Mananjary renivohitra, nosarahina amin’ny faritra Fitovinany. Napetraka amin’ny toerany ihany koa ny governora, ary voatendry ny governoran’ny faritra Fitovinany. Tonga ny ombivavy be ronono miisa 165 avy any Frantsa. Hahazoana ronono hatramin’ny 30 litatra isan’andro ny iray, raha efatra litatra isan’andro ny eto an-toerana. Ireo tanora niofana amin’ny tetikasa “Titre vert” no laharam-pahamehana hahazo izany. Mbola hisy omby anarivo hafa ho tonga. Nesorin’ny ligim-paritra 21 ny filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF), araka ny fivoriana tsy ara-potoana. Fiaraha-mitantana no hitondra ny federasiona mandra-pahatonga ny fifidianana. Andrasana ny fanapahan-kevitry ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) sy ny federasiona afrikanina (Caf). Nanatanterahana fiaraha-midinika ny CFM nandrafetana paika sy hisorohana izay mety ho disadisa amin’ny fifidianana 2023. Anisan’izany, ohatra, ny tsy tokony hanovana matetika ny lalàna mifehy ny fifidianana, ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin’ny fikarakarana fifidianana…Raharaham-pirenena avokoa izany? Tsy misy atao ambanin-javatra na ambin-javatra, fa mifameno ho amin’ny fampandrosoana… marolafy.R. Nd.L’article Jery taratra…: Raharaham-pirenena.. marolafy a été récupéré chez Newsmada.